Ikhabhini enye - iHarthouse Haven - I-Airbnb
Ikhabhini enye - iHarthouse Haven
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguCliff And Angela
UCliff And Angela yi-Superhost
Yiza uhlale nathi ukuze ufumane isimbo kunye nobushushu obunikezwa ziikhabhathi zaseHarthouse, ezibekwe kwindawo entle yasemaphandleni. Baleka izihlwele zasehlotyeni kodwa ukuba ngumgama oyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka elalini kuthetha ukuba ulwandle, iindawo zokutyela, iimarike kunye nekofu enkulu zonke zifikeleleka ngokulula.
Sebenzisa olu luhlu ukubhukisha ikhabhinethi enye (ilala ezimbini) - ukubhukisha zombini iikhabhathi nceda ubhekisele kolunye uluhlu lwethu. Nokuba yeyiphi na indlela, uya kuba nayo yonke indawo kuwe. Ungajonga kwakhona uDorothy ibhasi!
"I-Retreat" ibekwe kude kwindawo yasemaphandleni yaseMangawhai kwaye ineekhabhathi ezimbini 'zaseHarthouse', nganye ineebhedi zokumkanikazi kunye neendawo ezincanyathiselweyo. Phakathi kweekhabhinethi zokulala kukho i-gazebo esembindini eneendawo zokupheka kunye nezokutyela (isidlo sakusasa selizwekazi sinikezelwa simahla) kunye nezihlalo zangaphakathi nangaphandle. Kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa kunye nendlu yangasese, ekwabekwe kwindawo esembindini. Zonke izibonelelo zizakhiwo ezitsha (eziyilwe kwaye zakhiwa yiHarthouse) kwaye zikwimeko ecocekileyo. Sibonelela ngeelinen ezikumgangatho ophezulu kunye neetawuli, kwaye iikhabhini zifakwe ngokucinga ngayo yonke into onokuyidinga. Iikhabhathi zineyazo yokungena enendawo yokupaka yabucala ecaleni kwe "Village".
Iikhabhinethi zethu zicimile kwigridi kwaye zinobuhlobo nokusingqongileyo (zisebenza ngamandla elanga); sineesokethi ze-12V ze-USB ukuze ukwazi ukuhlawulisa izixhobo zakho. Nangona kunjalo oku kuthetha ukuba izixhobo zombane ezifana nezomisi zinwele azinakusetyenziswa. Sikwabonelela ngezixhobo zokurisayikilisha kunye neemveliso ezilungele ukuphilisana kwendalo ukugcina ireyithi yethu ihambelana nokusingqongileyo!
4.93 · Izimvo eziyi-86
Iikhabhinethi zethu zibekwe kude kwindawo entle yasemaphandleni yaseNew Zealand, kodwa zikufuphi nedolophu kunye nolwandle (uhambo olufutshane lwemizuzu emi-5 ukusuka kulwandle oluphambili lwe-surf kunye nemizuzu eli-10 ukusuka edolophini). Ulwandle lwaselwandle lubonelela ngeendawo ezintle zokuqubha kunye nokusefa kunye nokuhamba okumnandi okunje ngeMangawhai Cliffs Walk eyaziwayo yehlabathi. Kwichweba elikufutshane ungaqesha iibhodi zokubheqa kunye neekayak. Kukho nezinye iilwandle ezininzi ezikufutshane (ezifana neTe Arai Point okanye iWaipu) ezifanelekileyo kuhambo lwemini.
Iintloko zeMangawhai kunye nedolophu yaseMangawhai 'ziindawo' ezimbini zale ndawo. Zininzi iindawo zokutyela ezigqwesileyo kunye neecafe kwindawo nganye kunye nemyuziyam, i-skatepark eyaziwayo kwihlabathi kunye 'nendawo yemisebenzi', iimarike ezininzi kunye neendawo zewayini. Sibonelele ngencwadana encinci ebandakanya iingcebiso zethu malunga neendawo zokutyela kunye nokuthatha indawo (kunye neekopi zemenyu yazo). Sikwabonelela ngeemephu zendlela, ulwazi lwabakhenkethi kunye neengcebiso zeminye imisebenzi kule ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Cliff And Angela
Ungakhathazeki - sikufutshane xa ufuna nantoni na! Nceda usazise ukuba ufuna iitawuli ezongezelelweyo zolwandle, ilinen etshintshiweyo okanye unayo nayiphi na eminye imibuzo yethu.
Sibonelele ngencwadana encinci ephendula imibuzo edla ngokubuzwa oya kuyifumana kwitafile yokutyela.
Ungakhathazeki - sikufutshane xa ufuna nantoni na! Nceda usazise ukuba ufuna iitawuli ezongezelelweyo zolwandle, ilinen etshintshiweyo okanye unayo nayiphi na eminye imibuzo yethu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mangawhai